IINGCAMANGO ZEBENCH ZANGAPHANDLE EZINGAMA-59 (UKUHLALA KWIIFOTO KUNYE NOYILO) - IINDAWO ZOKUPHILA NGAPHANDLE
Eyona iindawo Zokuphila Ngaphandle Iingcamango zeBench zangaphandle ezingama-59 (ukuhlala kwiifoto kunye noyilo)
Iingcamango zeBench zangaphandle ezingama-59 (ukuhlala kwiifoto kunye noyilo)
Apha sibonisa iintlobo zeembono zebhentshi zangaphandle ezinomtsalane. Ibhentshi engaphandle inokuba yindlela entle ukonwabela ngokupheleleyo eyadini yakho, ipatio okanye indawo yegadi. Zingasetyenziswa njengendawo yokuhlala ejikeleze umngxuma womlilo onokonwatyelwa lusapho kunye nabahlobo. Iibhentshi zinokusetyenziswa njengendawo yokucinga ngasese, okanye ukwandisa indawo yokuhlala kwangaphandle kwekhaya lakho. Apha ngezantsi uyakufumana iintlobo ngeentlobo zoyilo lweebhentshi zangaphandle onokuzisebenzisa ukukhuthaza ukwenza eyakho indawo yokumema eyadini yakho.
indlela yokubopha i-windsor
Ejikelezwe yingca eluhlaza eluhlaza kunye nomqolo ongemva wezityalo ezitshatyalaliswayo, umgodi wamatye wamatye kunye nebhentshi yelitye egobileyo eboniswe ngasentla yindawo efanelekileyo yokuphumla. Ihonjiswe nge-neon epinki kunye ne-orenji yokuphosa imiqamelo kunye nokuhamba neseti yefanitshala eyomeleleyo yomthi, lonke usapho lunokuhlangana ndawonye phezu komlilo ofudumeleyo. Amatye e-Beige agudle isithuba setyhula sepatiyo ebonelela ngotshintsho kubume bengca.
Kubantu abaninzi, umyezo ligugu lendlu yabo kwaye bonwabile. Ngokuhlala kwabantu ezidolophini kunye nokunyuka ngokukhawuleza kwexabiso lokuthengiswa kwezindlu, ukuba ne-oasis yakho lilungelo lwanamhlanje. Abantu abasikelelwe ukuba babe neegadi ezintle kufuneka babenendawo enkulu yokuhlala apho banokuncoma umsebenzi wezandla zabo. Xa ukhetha ibhentshi engaphandle elungele ikhaya lakho, kulungile ukuba uqwalasele uluhlu olubanzi lwezixhobo. Emva koko dibanisa iimpawu ezibonakalayo zomzimba kunye nexabiso lobuhle kuluphi uhlobo lwegadi onayo, apho egadini ungathanda ukubeka isihlalo, kwaye ungathanda njani ukuba uphumle xa usegadini yakho.
Nazi iintlobo ezimbalwa eziqhelekileyo zeengcamango zebhentshi zangaphandle ezinokuthi zilungele iintlobo ezininzi zegadi.
Eyakhelwe-ngaphakathi - olu hlobo lokuhlala ngaphandle lufezekile ukuba ulindele ukubamba inani elikhulu labantu kwindawo yakho yangaphandle. Ngesakhono sokudityaniswa ngokupheleleyo neebhokisi zezityalo kunye nemingxunya yomlilo, ezi yindlela entle yokulungiselela iindawo ezinkulu zangaphandle kunye nokwandisa umbono wegadi kunye nembonakalo yomhlaba. Ukuqhelaniswa kweesetyhula yindlela efanelekileyo yokudala i-dynamics yoluntu, ngelixa udala uhlobo oluhleliweyo lweendawo zokuhlala ezikhuthaza ukunyakaza okungakumbi kunye nendawo enkulu ephakathi. Ngokwesiqhelo kwenziwa ngesiseko sesamente, izihlalo zinokwenziwa ngesamente epholileyo, okanye inokwenziwa ngomthi okanye ngethayile.
Ukuxhoma -Ulungele abantu aba-1-2 kuphela, olu lolona hlobo lokuzonwabisa oluhle kakhulu ngaphandle, luxhonywe kwibhodi ephezulu, ibhalkhoni, okanye nokuba ngumthi omkhulu womthunzi. Oku kulungiselelwe ukuba kujongwe kwezona mbono zintle egadini, ukuze ukonwabele ukushukuma okuthambileyo ngelixa ujonga ubuhle bendawo.
Ibhentshi nophahla - nangona iigadi bezenzelwe ukonwabela ngaphandle, ngamanye amaxesha, indalo iyangena endleleni xa ithatha isigqibo sokuphosa imvula enamandla, ilanga elinzima kunye nekhephu elinzima kwigadi yakho. Ukugcina ukhuselekile, ibhentshi inokudityaniswa ngokupheleleyo kunye nophahla lwesakhiwo, nokuba luphahla oluncinci, okanye nje itrellis enemithi yeediliya emnandi. Ewe kunjalo, kuhlala kufanelekile ukuthelekisa izinto kunye nombala wophahla ukuya kubume bendalo bendawo, kunye nokungavimbeli ukukhanya kakhulu, umoya kunye nokujonga ngesigqubuthelo sayo.
Ibhentshi yepikniki - olona khetho lubalulekileyo lokuhlala ngaphandle, ibhentshi yepikniki lolona khetho lubhetyebhetye kwizitiya ezininzi, njengoko inokusetyenziselwa izinto ezahlukeneyo kwaye inokubamba inani labantu. Nokuba usebenzisa nje itafile yepikniki kunye nebhentshi combo yeti nje yasemva kwemini okanye usuku olupheleleyo lwebarbecue, ibhentshi lepikniki linokukwamkela konke oko. Olu bhetyebhetye kwakhona luvumela indawo yepatio ukuba isetyenziselwe imisebenzi emininzi yemihla ngemihla eya kuthi ivaleleke ngaphakathi ngaphakathi endlwini, njengokufunda, ukutya, ukusebenza kunye nokuzonwabisa kweendwendwe kunye neendwendwe. Emva kwayo yonke loo nto, ukukhanya okuncinci kwelanga kunye nokuphefumla komoya omtsha kuthetha umohluko phakathi komhla obandayo, umhla wedrabhu kunye nokuqhuma kwendalo kwamandla avela ngaphandle.
Ibhentshi exhaswa ngokuthe tye Olona hlobo luxhaphakileyo lwezihlalo zangaphandle, ezi zinokuthengwa kwivenkile kuluhlu olubanzi lohlahlo-lwabiwo mali, uyilo kunye nokugqitywa. Olu lukhetho oluqhelekileyo oluhle lwe-DIY-ers, ngenxa yeprofayile yayo elula kodwa esebenzayo.
Ibhentshi engenamqolo - olona hlobo lulula lokuhlala ngaphandle, olu hlobo lwesitulo lufanelekile kwiindawo ezinkulu zangaphandle apho isihlalo siza kusetyenziselwa indawo yokuphumla yethutyana, hayi njengendawo yokuhlala ixesha elide. Kulungile nakwiindawo apho ibhentshi ingaphazamisi naziphi na izinto ezibalulekileyo zomhlaba, njengoko inokuyilwa iphantsi kwaye ingazukisi.
Ibhentshi egobile yangaphandle
Ibhentshi yangaphandle ye-Metal
Ibhentshi yangaphandle yomthi
Ibhentshi yangaphandle ye-DIY
Ikhonkrithi yangaphandle yeKhonkrithi
Ibhentshi yeGlider yangaphandle
Yangaphandle Swing Bench
I-Wicker yangaphandle yeBench
Ibhendi yangaphandle yeRustic
IiBhentshi zePaki zangaphandle
Ibhentshi yePikniki yangaphandle
Ibhentshi yeGadi yangaphandle
Le patio yendlu yangasemva kwendlu, eyenziwe kwilitye elihlanjwe, lihleli kakuhle kunye nomhlaba we-dessert. Umngxunya womlilo, ophakathi kweebhentshi ezintathu eziphakanyisiweyo, ubonelela ngobushushu ngexesha lobusuku obubandayo, ngelixa ichibi elingasemva liyindawo eyamkelekileyo emini. Indawo yokuhlala ijikelezwe ngumhlaba kunye nenkunkuma egcina udonga olujikelezileyo.
Indlu yendlu enophahla oluphindwe kabini inepatio enkulu, eqala nge-pergola eyenziwe ngomthi ngaphezulu kwendawo yokutyela yangaphandle esekwe kwelinye icala, kunye nomgodi wamatye owakhiwe ngomlilo kunye nebhentshi elityebileyo kwelinye. Eyakhelwe ematyeni e-beige e-porous rock, indawo yokuhlala inika indawo yangaphandle yangaphandle i-rustic vibe.
Eli khaya likhulu lasekhaya lasehlotyeni lizibeka lodwa ngaphandle kongeze umngxuma womlilo osemva kwendlu oqhotyoshelwe kwindlu yangasemva kwefresco. Yenziwe ngeebhloko zelitye elibomvu, umngxuma womlilo uthwala umahluko oqinileyo kodwa onobuqhophololo kwibhodi emhlophe yokuqhwaba indlu, kodwa ithotywa phantsi ngokusebenzisa ifanitshala yangaphandle yeekiti kunye neekhushi.
Hlala kwiinduli ezibomvu ezisentlango, le patio yaseMexico inesiphatho esimthubi esigqibeleleyo esitulweni sendawo yokuhlala ikhonkrithi. Oku kugqitywa kugungqisiwe kusetyenziswa isitena esibomvu esimthubi sesihlalo kunye neethayile zepateni yokuhombisa ejikeleze umngxuma womlilo ophakathi kunye nodonga lwangasemva. Indawo yomgodi womlilo ifikelela encotsheni yesithambiso, esenza uhlobo lwencopho egxininisiweyo.
Nangona ilula, le bhentshi intle yentsimbi ibonisa ukuskrola kunye noyilo lomdiliya ngasemva, ukongeza ukubamba kobuhle kuyo nayiphi na igadi. Le bhentshi kufuneka ihlale ixesha lokuphila, ngenxa yomzimba wayo oqinileyo kunye nesibheno esingapheliyo.
Jonga le bhendi yentsimbi yangaphandle e-Wayfair
Le patio iflegi yelitye entle ijonge ngaphezulu kwefama enkulu eluhlaza kwaye ibekelwe bucala ngohlobo lwesitayile esirhangqwayo esiphindwe kabini. Iibhentshi zentsimbi ezenziwe nge-antique zibekwe kwipatio kwaye zijikeleze umgodi womlilo ophantsi owakhiwe ngezitena ezibomvu. Yokwandisa izimvo ukhetha imibono yebhentshi yangaphandle ephathekayo inokubonelela ngokuguquguquka ngelixa ujonge ukuphuma okanye ukutshona kwelanga.
Esi sitayile sendabuko sipeyintwe ngombala omnyama wentsimbi sihlala phantsi phambi kodonga oluphezulu lwegadi. Isakhelo sayo esimhlophe sichasana kakuhle nohlaza oluhlaza emva kwayo, kwaye ipatheni entsonkothileyo izisa ukuchukumisa kweklasi kwigadi eqhelekileyo.
Le bhentshi igadi yentsimbi eyomeleleyo, nokuba ibekwe kwindawo ekufutshane namanzi ayizukungcolisa, ngenxa yamandla ayo okufakwa nge welding ngesandla, kunye nomphetho wokugubungela umgubo. Lo mthunzi uluhlaza okwesibhakabhaka kukungena okufihlakeleyo kodwa okucacileyo kweli cala lasekhaya, kwaye kudibana ngokukodwa ngocingo lwalo olumhlophe olusethwe kwiikholamu zomthi ezomeleleyo. Umgangatho weplanga omthi ongwevu kunye neebhotile zeterracotta ezimdaka zikwayindlela efihlakeleyo yokwenza umbala oluhlaza okwesibhakabhaka uphume ngcono. Jonga le bhentshi yangaphandle yesinyithi e-Wayfair
Ibhentshi yentsimbi engenamqolo inentsimbi eyenziwe ngomnyama eyenziwe kwimisongo yeediliya kunye neempawu, ehleli phambi kodonga olubomvu lwezitena ezibomvu. Ukujikeleza ngeenxa zonke, izityalo ezikhulu ezinamagqabi, kunye nokutshiza kombala kwiimbali zonyaka. Iibhentshi zihlala kwindalo ngobuqili kodwa ngoku zivakalisa umbono othile wenostalgic ngenxa yeprofayili yayo yakudala.
Ibhentshi enamacala amathandathu inomzimba wealuminium osimahla ogqityiweyo kubhedu lwe-antique. Ngomthamo wokuthwala malunga neepawundi ezingama-750, le bhentshi ilungele iindawo ezinkulu zentlalo zangaphandle. Kule meko, ibhentshi yegqabi kunye ne-lattice motif ibekwe embindini we-ashlar tile floored patio.
Jonga ibhentshi yangaphandle yealuminium e-Wayfair
Le bhentshi indala, ipeyintiweyo i-aqua eluhlaza okwesibhakabhaka emva koko yaphinda yatshitshiswa ukuyinika ukubukeka kweediliya kunika le gadi yangasemva ukuba iphinde ibekho. Ukuhlala ekupheleni kwendlela yegrabile kwaye kungqongwe zizityalo eziqhakazileyo kunye neentyatyambo, umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ngumdlalo omnandi kwimibala eyahlukeneyo ekhoyo phakathi kweentyatyambo.
Ihleli kwipatiyo yegreyigreyi engwevu, le bhentshi inde yomthi omdaka ngombala ineprofayili yendabuko enomthi othe nkqo othe tyaba ngasemva kunye nesihlalo esibekwe ngaphakathi kwendawo yokuphumla kwengalo. Uhleli kweli bhentshi, umntu uyakonwabela ukubekwa ngaphambili kwizihlahla ezinde eziqhakazayo ezimhlophe nezicocekileyo ezibomvu.
Le ndlwana ilula itywiniweyo inombala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye ne-white trim likhaya eligqibeleleyo kwitoni efudumeleyo yeenkuni zelungiselelo lendawo yokuhlala eyingqayizivele. Yenziwe ngohlobo lwe-L, ibhentshi engaphandle idityanisiwe kunye nezityali ezenziwe ngomthi ezenziwe ngeeplanga, zibekwe kwicala eligangathiweyo elityaliweyo lengca kufutshane nendlu.
Ibhentshi elula eyenziwe ngomthi ifaka iprofayili ye-S egobile kwisinyithi esimnyama esihonjiswe ngobungakanani beepali zemithi ezihamba ngaphambili. Ibekwe phambi kwendlela yeenyawo ethe tyaba, le bhentshi iphantsi kwaye ivumela abantu abahleli phantsi ukuba bazive ingca ngezandla ngelixa behleli kule gadi intle.
Yenza okuninzi kwiindawo ezincinci zepatio ngokukhetha ibhentshi engaziva incinci. Ibhentshi elula eyenziwe nge-eucalyptus inepateni ethandekayo egobile ngasemva kwaye iziva ilungile ekhaya xa ibekwe ngaphezulu kombhoxo omhlophe noluhlaza ojikelezwe zizityalo.
Jonga ibhentshi yangaphandle yeenkuni e-Wayfair
Ukulingisa ubume bembombo yomqolo wabatyali begadi ngasemva kwayo, le bhentshi ijingayo iza ngobume be-L kwaye yenziwa ngokugqitywa komthi womsedare ofudumeleyo. Imiqamelo emhlophe nemibala eluhlaza okwesibhakabhaka yongezwa ngaphezulu kwaye ihamba kakuhle ngombala omfusa weentyatyambo, kunye nemifuno enzulu yodonga olugqunywe nge-ivy.
Xa usenza indawo yakho yangaphandle ye-DIY yokuhlala kubalulekile ukwazi eyona mithi uyisebenzisela iibhentshi zangaphandle. Ukusebenzisa uhlobo olufanelekileyo lweenkuni kuya kunceda ukuthintela ukonzakala elangeni nakubumanzi. Nazi ezinye zezona zinto zintle zemithi zokwakha ibhentshi yangaphandle: iAcacia, iRedwood, iCedare, iCypress, iTeak neShorea.
Le ndlu yesitayile yale mihla inendawo engasemva egangathiweyo yonke, isebenzisa amacwecwe amakhulu ekhonkrithi ahlukaniswe kakuhle ngamatye eengwevu omlambo. Ngaphandle kwefenitshala yangaphandle yeplastiki kunye nefriji yentsimbi engenasici, ibhentshi emile njengo-L ibaleka ijikeleze umda ongaphandle wendawo yangaphandle kwaye yenziwe ngeendawo zokuhlala ezenziwe ngomthi ezibekwe kwikhonkrithi exhaswa yikhonkrithi, ihamba nemizi-mveliso yekhaya eliphambili .
Isitayile sangoku sangasemva kwesitayile sibonisa ukusika okucekeceke, iplanga leplanga elibuyiselweyo elimnyama elisetyenziselwa udonga lwayo kunye nokuphakamisa umgangatho wepatio. Isetyenziselwa ibhentshi emile njengo-U kwaye yaphakamisa umngxuma womlilo ophela ngetayile emhlophe. Isihlalo sebhentshi emile okwe-U sihonjiswe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, ngokuchaseneyo nokugqitywa komthi omdaka ngombala kunye noothango oluhlaza oluhlaza macala onke.
Isimbo sangaphandle sanamhlanje sinebhentshi encinci ye-DIY exhonywe kudonga lwangasemva lodonga olubi. Ngoyilo olulula, ukuphoswa kwemiqamelo kwimibala eqaqambileyo eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neorenji kuye kwongezwa, njengokuba yayiyindlela yokuhombisa iphegzagzag ngasemva. Kwicala layo, ukuxhoma izityalo zomoya kunye nezityalo zokuhombisa kuphefumla ubomi kwisithuba.
Ukugqibelela kwimisebenzi yosapho ye-DIY, ibhentshi yakudala egadini inokukwazi ukukhutshwa ngokuzoba kwiipateni ezintsha. Ukupeyinta ngokupeyinta kwi-stencil yenye yeendlela ezilula kunye nezincinci zokufezekisa oku kujongeka. Xa ibuyiselwe kwindawo yayo, ibhentshi elisandula ukupeyinta livelisa umbala weebhastile zeentyatyambo ezisezantsi ngcono.
Yonke le patio iphindwe kabini eyadini yangasemva inezitepsi ezinqumlayo ezivela kumgangatho ongaphezulu webhalkhoni ezantsi ziye kumgangatho owandisiweyo wokhuni ojikelezwe ngumsele wamatye okusika kunye nendawo yengca. Umgangatho osezantsi, ophakanyiswe emhlabeni, ubeka iibhentshi ezilula kodwa ezisebenzayo zomthi zohlobo olunye lwenqanawa, zidityaniswa ngokulula, njengoko zibotshelelwe ngqo kumgangatho, zibenza zikhuseleke kwaye zomelele ukusetyenziswa ngaphandle.
Le ndlu inkulu yecala lentaba inesamente esomeleleyo kunye nokugqitywa kweenkuni kugqitywe ezindongeni zayo nophahla. Umgca weebhentshi zekhonkrithi ngapha nangapha komnyango sisihlalo esifanelekileyo xa uncoma umbono kwaye udibanisa ngokwendalo nendlu kunye namawa ajikelezileyo. Iithayile zelitye elisikwe ngesikwere zikwalungisa indlela eya ekungeneni kwaye zikhanyiswe zizibane ezincinci ezifakwe ezantsi kwezitulo.
I-patio yesitayela sanamhlanje kwii-engile ezibukhali ezibonisa umngxuma ophakamileyo womlilo kunye nezihlalo ezihleliweyo ngeenxa zonke. Ibhentshi yekonkile emile okwe-L ihonjiswe nge-moss green cushion kunye ne-psychedelic pattern ye-backrest yayo, umahluko ocacileyo kwilitye elimpunga ngombala elisetyenziselwa ipatio eseleyo.
I-patio yesitayile sase Mzantsi Ntshona ifaka isixhobo sokutyala, ibhentshi esezantsi yekona kunye nendawo yomlilo eyenziwe kwikhonkrithi egudileyo ebaleka ecaleni lodonga lwe-beige block eludongeni. Yenziwe ngombala omuhle we-chocolate, isamente igqibezela ukudibanisa ingubo ebomvu emfusa, isitena esibomvu sendawo yomlilo kunye neetafile ezimdaka ngombala kwifenitshala yangaphandle. Kuzo zonke izinto ezijikeleze udonga lwe-perimeter, iibhokisi zezityalo eziziingxande zibonelela ngento elula kodwa entle yokuhombisa.
Ibhentshi elisezantsi, kunye nokugqitywa kombala ongwevu ngombala, lulongezo olugqibeleleyo kolu luhlu luluhlaza lwetyholo. Indawo ikhokelwa yingca ende kunye nesitampu somhlaba, into elula yoyilo kwindawo yasendle, engafakwanga ndawo.
Ibhentshi emhlophe yokubhabha ngaphandle ezimbini zakhiwe ngomthi onzima womnga kunye nesitayile selizwe esiya kujongeka sinomtsalane nakweyiphi na iveranda, ipaki okanye ipatio. Jonga le bhentshi yokutyibilika kwindawo yothando e - IAmazon
Ibhentshi yokutyibilika ngaphandle yindawo entle yefenitshala yegadi yakho. Ukuhamba okushukumayo kwebhentshi kuyenza ibe yindawo yokuphumla ukonwabela ikomityi yekofu yasekuseni okanye ukukhaba emva komhla wokusebenza omde.
Jonga le bhentshi igreyider yangaphandle e-Wayfair
Ibhentshi ye-Adirondack ejingayo idala into eguqukayo ngakumbi ngelixa isathelekisa nesitulo sezihlalo ezibini zewayini ezenziwe ngokhuni. Ngezihlalo ezigqityiweyo ngomthi obomvu ofudumeleyo, ithelekiswa kakuhle nengca eluhlaza eqaqambileyo kunye nekhonkrithi elula egreyithiweyo egreyini.
Le ndlu intle yamachibi inomgangatho omde kwicala layo, ijonge kude neefestile ezinkulu zemifanekiso ecocwe ngoyilo olumhlophe. Umgangatho weplanga, wenziwe ngeplanga elityheli lomthi otyheli, ngokuchaseneyo nebhalkoni enkulu yamaplanga kunye nepatio yangaphandle esetiweyo. Kwelinye icala, ibhentshi yokujija ethobekileyo ixhonywe kumgangatho ophezulu kwaye ithembisa umbono omangalisayo ngelixa ujika.
Le yadi ingaphaya komgangatho ibonisa oku kuseta kwebhentshi yomthi njengeyona nto iphambili yokuhombisa, kunye nolwakhiwo lwayo olujikeleziweyo kunye nebhentshi yeplati exhonywe phezulu. Uphahla oluluhlaza lwesilayidi oluhlala luba yindawo yokuchaza ubuhle, ngelixa libonelela ngomthunzi omninzi ngexesha lemvula okanye ukukhanya.
Yomelele kwaye ibanzi ngokwaneleyo ukuze uhlale isihlalo, ungachitha yonke imva kwemini ulala nje ujikeleze ipatiyo yangaphandle ngalesi sihlalo sithandekayo. Isiseko, esenziwe phezulu ngamaplanga amakhulu emithi kwaye sikhuselwe ngezikere zesinyithi ngokungathi yigophe ukusuka emhlabeni ukuya phezulu kwaye sibambe isigqubuthelo sendwangu ngaphezulu kwesakhelo somthi. Apha ngezantsi kwayo, isihlalo esimhlophe esiguqukayo esiguqulwayo sigcinwe phezulu kumacala omabini ngelaphu elilukhuni, elenza ukuba lichukumise kwaye libe mnandi.
Iijingi ezijingayo ngaphezulu komgangatho obomvu okhazimlisiweyo, le bhenki imhlophe yepeyinti eyenziwe nge-cylindrical motif ngasemva kwayo kunye nokuphumla kwengalo iqhotyoshelwe eluphahleni ngentambo. Ngelixa ujingayo kunye negadi enkulu entle ngasemva, ibhentshi ibonelela ngentuthuzelo ngesitulo sayo se-canary etyheli kunye nolwandle oluhlaza.
Le bhenki ijonge kakhulu ibhentshi ejikelezayo ejonge kwinduli iza kwindibano ekhethekileyo yeedriftwood. Ukuhonjiswa ngeembiza zeentyatyambo ezixhonyiweyo kunye nentloko endala yeOlmec esetyenziswa njengembiza yezityalo, le ndawo yokuhlala yangaphandle ikhupha umtsalane okrelekrele kodwa weediliya.
Phantse umfanekiso oqingqiweyo ngenkangeleko yawo, le bhentshi yeenkuni ixhonyiweyo yenziwe ngamatye athe tyaba ohlobo lomthi omthubi ojongeka ngathi uvela kumthi oxhonywe kuwo. Intambo yombane eluhlaza okwesibhakabhaka apho ibhentshi ixhonywe kuyo yahluke kakhulu ekugqityweni kweenkuni ezimnyama zebhentshi ejingayo kunye nemifuno yengca esandula ukuchetywa.
Ukuxhonywa kwityathanga eliqinileyo lesinyithi, esi sihlalo sijingayo sisongezo esihle kakhulu kuyo nayiphi na igadi yangasemva kunye neprofayili yayo ejikeleziweyo kunye nolwakhiwo lwewicker. Yenziwe nokuba ikhululeke ngakumbi ngezihlalo zokuhlala, izinto eziqaqambileyo zeorenji ziyindlela elungileyo yokuqaqambisa imisonto emnyama yentsimbi kwiipateni ezingabonakaliyo kunye nepatio emhlophe yesamente.
Le bhentshi ye-patio yentsimbi engenasinxina ye-100%, kunye neprofayili yayo emileyo ye-chrome, ehambelana kakuhle nokuseta kwegadi yanamhlanje. Kule meko, yatyhalelwa kwikona yetafile eyenziwe ngokhuni ene-grey-tinged nge balcony yeglasi. I-greenery ejikeleze kuyo igxininisa umxholo wamanje we-deck ngokusebenzisa i-bamboo. Kwelinye icala, le bhentshi inokusetyenziselwa nangaphakathi endlwini, kwaye inokumelana nokunxiba kunye nokukrazuka njengoko isiza njengesiqwenga esidityaniswe ngokupheleleyo.
Jonga ibhentshi langaphandle lesinyithi elingaphandle e-Wayfair
Esi siqwenga senziwe ngelitye eliqingqiweyo le-basalt, umzamo wobungcibi obangele isincoko esincomekayo sokuncokola kwaye unokuphilisa nayiphi na indawo yakudala yegadi. Ibekwe ekucoceni igrabile etyunyuziweyo, ibhentshi yamatye yenza ingxelo ebhaliweyo phakathi kwawo onke amahlahla aphantsi kunye nemifuno eyadini. Umphezulu webhentshi uhlanjululwe ngomphetho wendalo, ukudala indawo yokuhlala ekhuselekileyo nekhuselekileyo.
Jonga le bhentshi yelitye le-rustic e-Wayfair
Ipatio yokubhukuda enendawo yokuqubha enendawo yokuhombisa ilitye lekalika inendawo yokuhlala enesangqa esisebenzayo esingaphandle kwendlu enetafile ejikelezayo. Zonke zenziwe ngombala omnyama omnyama, indawo yokuhlala ikwabonisa imilo emhlophe yemozulu kunye nemilenze exhasayo. Jonga le bhentshi isangqa semi - IAmazon
Eli chibi lobunewunewu, elinomda ngeebhokisi ezimbini ezinkulu ezakhiweyo, likhanyiswe kakuhle ebusuku kwaye lingena ngeqonga elidadayo livela kwindawo yokuhlala yendlu. Eli qonga likroliweyo libonisa ifanitshala enye-umandlalo obutofotofo wosuku onemisila emhlophe kunye nokuphosa imiqamelo.
Ibhentshi emhlophe egobileyo yangaphandle ihleli ngobuqhetseba ecaleni kolwandle olwamkelekileyo olwenziwe kumgangatho weplanga opholileyo ojikelezwe ngumda wesamente. I-peacock blue cushion ayisiyomdlalo umkhulu kuphela echibini elinombala oluhlaza okwesibhakabhaka kodwa ikwenziwe ngelaphu le-sunbrella, ivumela ibhentshi ukuba isete ukumelana nemozulu kunye nokusetyenziswa rhoqo.
Jonga ibhentshi leephuli elingaphandle e-Wayfair
Le bhenki ye-rustic driftwood yeyokwakha krwada kakhulu, kodwa yayinomtsalane wengcibi ethile kuyo, ngakumbi kuba ihleli kanye elunxwemeni. I-palapa ime phezu kwebhentshi, indawo evulekileyo kunye nophahla lwamagqabi esundu, ilungele ukonwabisa umoya xa kushushu kunye nokuyila imbonakalo yolwandle.
Esi sitayile sobuchwephesha sasemva kwendlu senziwe ngomthi ojikeleze onke amaphepha kwithoni eshushu yomthi. Phakathi kwezi ntsika zomeleleyo zi-paler, ngakumbi iiplanga zeebhubhu zomthi ezisebenza njengesihlalo sokuhlala. Indawo yangaphandle ihonjiswe ngefenitshala yeplanga yangaphandle kwaye ibonakalisa iingqalutye ezicolekileyo zokuhombisa umhlaba.
Ibhentshi yegadi ineempawu zefern eziphumayo kwindawo yayo yokuphumla kunye nesihlalo esilula somthi. Oku kuyadibana nendawo eluhlaza eluhlaza etyalwe ngasemva kwayo ekwahlukileyo kwiindonga ezibomvu zezitena zendlu. Indawo eseleyo yegadi ibonisa ukuhlanjwa kwamatye eorenji kumgangatho wayo.
Le ndlwana incinci yedolophu inendawo yangasemva egangathiweyo, kodwa igcina izinto ezithile zegadi ngenxa yesityalo sayo sokulenga kunye namatyholo asezantsi ephantsi. Ibhentshi legadi elizimeleyo elibekwe wedwa libekwe kanye phambi kodonga olubomvu lwezitena, kufutshane nomthi omhombileyo kunye negolide egalelwe ucango lwangasemva. Umtyali ofanayo we-samente omhlophe obhalwe ngombala kunye neempawu zabantu uhlala ecaleni kwebhentshi kwaye ubambe iintyatyambo ezinobomi.
Le ndlela isisiseko yesamente yesamente yesitiya igxunyekwe yibhentshi enzima yomthi. Inamavili amakhulu eenqwelwana ezinqunqiweyo kwicala ngalinye, le profayili yeklasikhi ikwanazo neeslats zomthi esihlalweni nasemva. Olu longezo olukhulu ukunika nayiphi na indawo yegadi yakudala rhoqo i-quirky vibe.
Jonga ibhentshi enamavili enqwelo eWayfair
Le bhenki indala kunye ne-wicker isitulo sokuhlala sangaphandle sihlanjwe ngengubo entsha ngombala ohlaza okwesibhakabhaka, kunye neentyatyambo ze-DIY kunye nokuyilwa kwamagqabi ngaphezulu. Ibekwe kumatye abanzi esamente ahlukaniswe kakuhle afakwe amatye abomvu, ibhentshi yokhuni oluhlaza okwesibhakabhaka ngokwenene iphakamisa indawo engasemva kwendlu, ngakumbi ihleli phambi komdiliya oneentyatyambo unyuka udonga lwangaphandle lwendlu.
Ibhentshi eyenziwe ngomthi ipeyintwe umthunzi onzulu ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka yenza umdlalo omhle wombala kunye ne-wristia emhlophe emfusa emhlophe eqaqamba kuyo yonke le ndlela yokuhamba ngaphandle. Njengokugxininisa umbono ohehanisayo weentyatyambo ezixhonyiweyo, kubekwe amatye amakhulu eflethi kumgangatho kunye nodonga.
Lo mhlaba ubushushu, uneentyatyambo eziphantsi, ingca ye-carabao kunye nemithi yesundu, yindawo entle yangasemva kule bhenki yentsimbi ejongeka ngathi ipeyintiwe emhlophe. Ngesitulo semveli sokuloba kunye neepateni zokuxhasa, ezihonjiswe ngeentyatyambo kunye ne-motif yomdiliya, ibhentshi izisa ubuhle besikolo esidala kwigadi yetropiki entsha.
Ityholo elibomvu lizisa ubomi obufunekayo kwibhentshi yesiko egadini yekhonkrithi egobileyo kunye nomda weqanda kunye nemilenze yokuhamba kabini. Ukubuyela umva kwigadi yakudala, ingca eyotyiweyo kunye nefenitshala yangaphandle enika le ndlu yangasemva imvakalelo yezinto zakudala.
Ibhentshi eliqaqambileyo elipinki elenziwe kwiprofayili yesiko yinto eyothusayo kule patio encinci, yesitayile sangasemva kwendlu enezitena ezibomvu kunye nesamente. Ipatio iphela ijikelezwe macala onke zizityalo ezinamanzi athe nkqo.
Izitena ezibunjiweyo zibekelwe ukudala indawo encinci yepatio kule ngca inkulu kunye negadi. Kwipavile kuhlala itafile yokutyela yangaphandle eyenziwe ngomthi we-teak ontsundu omnyama. Esihlalweni sinezihlalo ezibini zebhentshi ezinde ezijikeleze itafile exandileyo yoxande. Itafile yonke ikhuselwe elangeni ngokusebenzisa isambulela esiluhlaza kwaye ihonjiswe ngezibane ezintathu zephepha.
Le ndlu igqwesileyo yanamhlanje inendawo emhlophe yokutyela ngaphandle emiswe ngeplanga elimhlophe. Oku kuthelekiswa kakuhle nomgangatho omnyama weplanga ohamba yonke indlela eya kwindawo evulekileyo enephuli, ekwabonisa ibhentshi yeplanga ebekwe kwikhonkrithi emhlophe epeyintiweyo kwaye ilayite ngezantsi kwesihlalo sayo.
Nangona ilula, le tafile yepiknikhi yomthi kunye neseti yebhentshi yongezwa ngokudibeneyo kuyo nayiphi na indawo yangaphandle, eguqula ukusuka kwitafile kunye nebhentshi ibekwe kwibhentshi enkulu yegadi. Yenziwe ngomxube we-fir kunye nokhuni oluqinileyo, le fenitshala yangaphandle yomthi yomelele, inokupeyintwa, kwaye ibonakalise igrommet egudileyo yofakelo lwesambrela ngexesha lemozulu yexesha.
Jonga le bhentshi yepikniki yetafile kwi-Wayfair
Itafile yokutyela eyenziwe ngomthi omnyama isongelwe ihleli kwifresco yendlu enkulu yesitayile sangoku. Izitulo zebhentshi zibonelelwa ngombhobho omnyama ontsundu webhentshi kwaye zihambelana kakuhle nemibala emhlophe esetyenziswe kwindlu yonke. Ibhokisi yokutyala iinkuni efudumeleyo emaphethelweni e-al fresco izisa ukufudumala kwindawo.
Beka phakathi kwamabala aqaqambileyo epinki kunye neentyatyambo zeorenji, kunye nomqolo wezityalo eziluhlaza eziluhlaza, le bhentshi inde ihlala kakuhle ngaphakathi kwindalo eyijikelezileyo. Ukusekwa kwisilayidi sesamente, kuza kugqityiwe kweenkuni eziqaqambileyo eziqaqambisa ngakumbi iintyatyambo ezijikelezayo.
Le bhentshi, ipeyintiwe luhlaza oludlamkileyo lwamahlathi, ibekwe phakathi kweziqwengana zeentyatyambo ezixakeke kakhulu, kwaye ikhokelela kwiindlela zokuhamba zamatye ezibanzi. Ngasemva kodonga olubomvu lwezitena kunye ne-ivy exhonyiweyo, ibhentshi, elikhutshiweyo kwindlela, yindawo elungileyo yokuphumla, nokuba kusebusuku, ngenxa yobukho bokukhanya kwelanga kanye ecaleni kwayo.
Le gadi yesiko lesiTuscan ikhupha iklasi, ngakumbi ngomgaqo wentsimbi olayini, kunye nezantsi kwawo ugqunywe nge-ivy, ecaleni kwamanyathelo ayo e-beige esamente akhokelela kumgangatho osezantsi wepatio. Kwelinye icala, kukho iqonga lamatye lezityalo, kwaye kwelinye, ukongezwa okhethekileyo ngohlobo lweplatifom yesamente emsobo, enombala ohlobisa ivasi emfusa. Indawo yokuhlala eyahlukileyo ifakwe isihlalo esikhulu esimhlophe esimhlophe, esihonjiswe ngemiqamelo yesilika.
Ibhentshi ye-rustic eyenziwe ngolwakhiwo olulula lwe-bamboo ilula, kodwa yomelele, iyaziqhelanisa neminyaka emide ye-bamboo yokuba yigophe kodwa yona ayinakuqhekeka. Intyatyambo i-trellis kanye emva kwebhentshi ikwakhiwe ngoqalo oluthandabuzekayo kodwa ibambe uluhlu lwezityalo ezijingayo. Indlela elula yezitena yekhonkrithi isetyenziselwa ipatiyo esemva kwendlu kwaye igcwalisa kakuhle ngombala oluhlaza ocacileyo wengca esandula ukuchetywa.
Le bhentshi isisiseko kodwa isebenzayo kakhulu inothotho lwee-slats ezenziwe ngokhuni ezimile phezu kweentsika ezimbini ezomeleleyo zekhonkrithi eziphuma emhadini wesanti omhlophe. Umngxuma omhlophe wentlabathi kunye neethowuni ezimhlophe zebhentshi yegadi yahluke kakuhle ngengca eluhlaza, iheji kunye nesihlahla esijikeleze yona, kwaye uyinike isibheno esiphantse sanamhlanje phakathi kokumiselwa kwegadi. Lo ngumzekelo olungileyo wokuba izimvo zebhentshi zangaphandle azidingi ukuba zigqithise xa umema izimvo zegadi.
Ifakwe kakuhle phakathi kweembiza ezimbini ezixhonyiweyo, le bhentshi yakudala ihleli ngokudibanisa ngokwendalo kunye nodonga olubomvu lwezitena kunye nemigangatho kunye neefreyimu zeminyango kunye nefestile. Ukuphucula ubuhle bayo, uyilo lwebhentshi lukwabonisa intyatyambo kunye ne-motif yamagqabi ngentsimbi eyenziweyo exhaswa yibhentshi, nakwindawo yokuphumla yecala layo. Izityalo zimbiza emhlabeni zongeza ukufudumala kwiseti yonke yegadi.
Iindawo ezinxulumene nokuPhila ngaphandle ongakuthanda.
Uyilo lweGazebo - Iingcamango zePergola - Uyilo lomngxunya womlilo ongaphandle - Iingcamango zokuhamba - Uyilo lwePatio
UJack Post Jennings Wesiko ngeenyawo ezi-4… $ 114.39 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-1088 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iimveliso zangaphandle zeZippity ZP19001 Madison Viny… Iidola ezingama-68.80 umthengisi ogqibelele (1200) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iimveliso zangaphandle zeZippity ZP19002 Fence Ne… $ 99.35$ 109.99 umthengisi ogqibelele (360) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ukuphosa amatye ngomthi oshushu ... $ 359.99 umthengisi ogqibelele (180) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Iingcamango zombala wodonga
yintoni umbala wesikhumbuzo somtshato wama-60
Inqaku lothando ngentombi yakho
Iinwele ezihlaziyiweyo zeenwele ezincinci